မိုကျကယျအိုဝငျ အရဲစှနျ့မခနျ့မှနျးရဲတဲ့ လီဗာပူး Vs ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျ… သူဘယျလိုခနျ့မှနျးထားမလဲ…? – Premier League Special
မိုကျကယျအိုဝငျ အရဲစှနျ့မခနျ့မှနျးရဲတဲ့ လီဗာပူး Vs ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျ… သူဘယျလိုခနျ့မှနျးထားမလဲ…?
ဒီတဈပတျမှာ မိုကျကယျအိုဝငျအတှကျ အခကျအခဲဆုံးခနျ့မှနျးရမယျ့ပှဲစဉျကတော့ လီဗာပူးနဲ့ ယူနိုကျတကျတို့ရဲ့ ပှဲစဉျပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ပရီမီးယားလိဂျမှာ အခါးသီးဆုံးပွိုငျဘကျ နှဈသငျးအဖွဈသတျမှတျခံထားရတဲ့ အသငျးတှမှော ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတဈယောကျအတှကျတော့ ဒီပှဲမှာ ပှဲခနျ့မှနျးရလဒျမှနျဖို့ထကျ နှဈဘကျ အသငျးပရိသတျတှရေဲ့ အမုနျးကိုမခံရဖို့ တှေးနမေိမှာက သခြောပါတယျ။
မိုကျကယျအိုဝငျဟာ လီဗာပူးရဲ့ ဂန်တဝငျကစားသမားတဈဦးဖွဈသလို ယူနိုကျတကျမှာလညျး ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ (၇) ပိုငျရှငျတှထေဲက တဈဦးဖွဈခဲ့သူပါ။ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ပရီမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျတှကေိုခနျ့မှနျးခဲ့ရာမှာ မှနျကနျမှုတှရေရှိနတေဲ့ အိုဝငျရဲ့ခနျ့မှနျးမှုတှကေို နှဈဘကျစလုံးက အသငျးအမာခံပရိသတျတှစေောငျ့ကွညျ့နကွေပါတယျ။
ဘနျလအေသငျးကို အနိုငျရရှိပွီး အမှတျပေးဇယား အဆငျ့ ( ၁ )နရောကို ရောကျရှိလာတဲ့ ယူနိုကျတကျဟာ ဒီတဈပတျမှာ အဆငျ့ ( ၂ ) နရောက လီဗာပူးအသငျးနဲ့ အနျဖီးလျကှငျးမှာ ကစားရဖို့ ရှိနပေါတယျ။
လီဗာပူးအသငျးအနနေဲ့ ယခု ပှဲစဉျကို အနိုငျရရှိပါက အဆငျ့ ( ၁ ) နရောကို ပွနျလညျ တကျရောကျနိုငျမှာ ဖွဈသလို တဈဘကျမှာလညျး ယူနိုကျတကျက အနိုငျရရှိခဲ့မယျဆိုရငျ လကျရှိခနျြပီယံကို ( ၆ ) မှတျထိ အသားစီးရနိုငျမယျ့ အခှငျ့အရေး ရှိနတော ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူး နှငျ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဟောငျး မိုကျကယျ အိုဝငျက ယခု ပှဲစဉျဟာ (၀ – ဝ) သရရေလာဒျ ထှကျပျေါလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
” ဒီပှဲစဉျက တကယျ့ Super Sunday ပှဲစဉျပါပဲ ။ ဇယားထိပျက ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ အနျဖီးလျကှငျးမှာ ပွိုငျဘကျဟောငျးကွီးကို သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျရဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ဒီပှဲစဉျက အိုလေ ဂနျနား ဆိုးရှားအတှကျ အလှညျ့အပွောငျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ ။ အနိုငျရရှိခဲ့မယျဆိုရငျ ခနျြပီယံဆုကို စိနျချေါဖို့ အဆငျ့ ( ၁ ) နရောမှာ ဆကျလကျရပျတညျခှငျ့ ရပါလိမျ့မယျ။”
” လီဗာပူးက ပရီးမီးယားလိဂျ အိမျကှငျး ပှဲစဉျ ( ၆၇ ) ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲ မရှိ ရပျတညျထားနိုငျတာ တှရေ့တယျ။ ယာဂနျ ကလော့ အနနေဲ့ ( ၂ ) နှဈဆကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံ ဖွဈနိုငျဖို့ အဓိကကြျောဖွတျရမယျ့ ပှဲစဉျတဈပှဲလို့ သဘောထားပွီး ကစားသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ”
” လီဗာပူးအသငျးနဲ့ သကျဆိုငျသူတှေ ၊ အထူးသဖွငျ့ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ အဆိုပါ မှတျတမျးကောငျးကို ယူနိုကျတကျနဲ့ ပှဲစဉျမှာ ကြိုးပကျြမသှားဖို့ မြှျောလငျ့နကွေပါလိမျ့မယျ။ ”
“( ၂ ) သငျးစလုံးက တနျပွနျတိုကျစဈ ကစားရတာ ကွိုကျတဲ့ အသငျးတှဖွေဈလို့ ဒီပှဲစဉျက ကွောငျ နှငျ့ ကွှကျလို ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ ။ ကြှနျတေျာ့ အထငျကတော့ ( ၂ ) သငျးစလုံး counter-attacks တှကေို အဓိက ထိနျးခြုပျဖို့ အာရုံစိုကျလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ အနျဖီးလျမှာ သရရေလာဒျ ထှကျပျေါလိမျ့မယျလို့ မွငျမိပါတယျ။” လို့ သုံးသပျထားပါတယျ။
မိုက်ကယ်အိုဝင် အရဲစွန့်မခန့်မှန်းရဲတဲ့ လီဗာပူး Vs ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်… သူဘယ်လိုခန့်မှန်းထားမလဲ…?
ဒီတစ်ပတ်မှာ မိုက်ကယ်အိုဝင်အတွက် အခက်အခဲဆုံးခန့်မှန်းရမယ့်ပွဲစဉ်ကတော့ လီဗာပူးနဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပရီမီးယားလိဂ်မှာ အခါးသီးဆုံးပြိုင်ဘက် နှစ်သင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အသင်းတွေမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒီပွဲမှာ ပွဲခန့်မှန်းရလဒ်မှန်ဖို့ထက် နှစ်ဘက် အသင်းပရိသတ်တွေရဲ့ အမုန်းကိုမခံရဖို့ တွေးနေမိမှာက သေချာပါတယ်။ မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာ လီဗာပူးရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သလို ယူနိုက်တက်မှာလည်း ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကျောနံပါတ် (၇) ပိုင်ရှင်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူပါ။ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပရီမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ရာမှာ မှန်ကန်မှုတွေရရှိနေတဲ့ အိုဝင်ရဲ့ခန့်မှန်းမှုတွေကို နှစ်ဘက်စလုံးက အသင်းအမာခံပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။
ဘန်လေအသင်းကို အနိုင်ရရှိပြီး အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ( ၁ )နေရာကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီတစ်ပတ်မှာ အဆင့် ( ၂ ) နေရာက လီဗာပူးအသင်းနဲ့ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ ကစားရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ ယခု ပွဲစဉ်ကို အနိုင်ရရှိပါက အဆင့် ( ၁ ) နေရာကို ပြန်လည် တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို တစ်ဘက်မှာလည်း ယူနိုက်တက်က အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် လက်ရှိချန်ပီယံကို ( ၆ ) မှတ်ထိ အသားစီးရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူး နှင့် ယူနိုက်တက် ကစားသမားဟောင်း မိုက်ကယ် အိုဝင်က ယခု ပွဲစဉ်ဟာ (၀ – ၀) သရေရလာဒ် ထွက်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
” ဒီပွဲစဉ်က တကယ့် Super Sunday ပွဲစဉ်ပါပဲ ။ ဇယားထိပ်က ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကြီးကို သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်က အိုလေ ဂန်နား ဆိုးရှားအတွက် အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်ဖို့ အဆင့် ( ၁ ) နေရာမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့် ရပါလိမ့်မယ်။ လီဗာပူးက ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ် ( ၆၇ ) ပွဲဆက် ရှုံးပွဲ မရှိ ရပ်တည်ထားနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ ယာဂန် ကလော့ အနေနဲ့ ( ၂ ) နှစ်ဆက် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်ဖို့ အဓိကကျော်ဖြတ်ရမယ့် ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ သဘောထားပြီး ကစားသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းနဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေ ၊ အထူးသဖြင့် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အဆိုပါ မှတ်တမ်းကောင်းကို ယူနိုက်တက်နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ကျိုးပျက်မသွားဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ( ၂ ) သင်းစလုံးက တန်ပြန်တိုက်စစ် ကစားရတာ ကြိုက်တဲ့ အသင်းတွေဖြစ်လို့ ဒီပွဲစဉ်က ကြောင် နှင့် ကြွက်လို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော့် အထင်ကတော့ ( ၂ ) သင်းစလုံး counter-attacks တွေကို အဓိက ထိန်းချုပ်ဖို့ အာရုံစိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အန်ဖီးလ်မှာ သရေရလာဒ် ထွက်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။” လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
စီးရီးအအေသငျး ၄ သငျးပေါငျးရဲ့ ဝငျငှထေကျ ပိုမြားနတဲ့ ရျောနယျဒိုရဲ့လစာ